माओवादी दुई स्थानमा, काँग्रेस, नेकपा एमाले र मधेशी जनअधिकार फोरम एकएक स्थानमा विजयी | nepal माओवादी दुई स्थानमा, काँग्रेस, नेकपा एमाले र मधेशी जनअधिकार फोरम एकएक स्थानमा विजयी | nepal
We have 6067 guests and 312 members online
Content View Hits : 41581959
Saturday, 11 April 2009 12:06
काठमाण्डौं, संविधान सभा उपनिर्वाचन भएको ६ निर्वाचन क्षेत्र मध्ये दुई स्थानमा एकिकृत माओवादीले जितेको छ भने नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र मधेशी जनअधिकार फोरम एक\_एक स्थानमा विजयी भएका छन् ।
रोल्पा २ को मत परिणाम आउन बाँकी छ । रोल्पाबाट माओवादी उम्मेदवार सन्तोष बुढा मगरको विजयी निश्चित भएको बताइएकाले उपनिर्वाचनबाट माओवादीको एक सभासद बढ्ने भएको छ । उता काँग्रेस र फोरमले भने एक एक स्थान गुमाएको छ । एमालेको एक स्थान बढेको छ ।
गत वर्ष सम्पन्न संविधान सभा निर्वाचनमा काँग्रेसबाट राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले जितेको स्थानमा एमाले उम्मेदवार रघुवीर महासेठ विजयी भएका छन् । चैत २९ गते घोषणा गरिएको परिणाम अनुसार महासेठले १३२३० तथा उनका निकतम प्रतिद्धन्द्धी तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका श्रीकृष्ण यादवले १२१८९ मत प्राप्त गरेका छन् । काँग्रेसका तर्फबाट उम्मेदार बनेका राष्ट्रपति पुत्रले तेस्रो स्थान प्राप्त गरेका छन् ।
फोरमले छोडेको मोरङ ७ मा काँग्रेस उम्मेदवार डा. शेखर कोइराला विजयी भएका छन् । कोइरालाले १२०६१ मत र उनका निकतम प्रतिद्धन्द्धी फोरमका चुमनारायण तवदारले ११३९० मत ल्याएका थिए । मोरङ ५ बाट फोरमका जयराम यादव १३८११ मत पार निर्वाचित भईसकेका छन् ।
कास्की १ मा माओवादी उम्मेदवार कृष्णबहादुर गुरुङ्गले १२२५७ मत पाएर निर्वाचित भएका छन् । काँग्रेसका दिपक गुरुङ्गले १२२२५ मत ल्याएका थिए ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले छाडेको कंचनपुर ४ मा माओवादीका हरिश ठकुल्ला निर्वाचित भईसकेका छन् ।